LAGU DARO El Calafate SIMARG FSX & P3D - Rikoooo
downloads 6 551
Auto-installer cusboonaysiin v11
Muuqaalka sheedda ka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ku yaalla El Calafate ee Argentina, ayaa labadii xilli ciyaareed, xagaaga ama jiilaalka (baraf) in waxa ay noqon doontaa suurto gal ah in aad doorato inta lagu guda jiro rakibaadda automatic. muuqaal waxaa ka mid ah dhammaan dhismayaasha ugu weyn iyo qaabab photo-dhabta ah.
Garoonka Caalamiga ah ee Comandante Armando Toolac (Spanish: Aeropuerto International de El Calafate - Comandante Armando Toolac) (istcimaalka: ysa, ICAO: SAWC) waa garoonka diyaaradaha ee Gobolka Cruz Santa, Argentina. Waxay ku taalaa qiyaastii 21 km (13 mi) bari ka xigta magaalada El Calafate. Garoonka ayaa waxaa si wadajir ah oo ay dowladda iyo London Supply. Currently, garoonka waa u adeegi jiray oo kaliya by Aerolíneas Argentinas, LAN Argentina, iyo rarta. Waxaa garoonka diyaaradaha westernmost Argentina adeegaa duulimaad qorsheeyey.
Garoonka ayaa waxaa la caleemo ee November 2000, bedelida Airport hore Lago Argentino (ING / SAWL). Hadda waa weyn ee laga galo in ay Seeraha Qaranka ee Los Glaciares. Qorshahaa waxa garoonka diyaaradaha ee la abuuray by Carlos Ott, dhise caan ka Uruguay. In 2010, garoonka waxaa loo isticmaalay in ka badan 500,000 rakaab ah.
El Calafate waa magaalo ee gobolka of Santa Cruz, Argentina, iyo madaxa waaxda Lago Argentino. Waxay ku taalaa ee Argentine Patagonia, meel u dhow xeebta koonfureed ee Lake Argentino iyo 256 km waqooyi-galbeed ee Rio Gallegos. Its dadka ahaa 6,143 deggan ee 2001. (Source: Wikipedia)